विदेशी प्रतिहरू - अर्को देशबाट वृत्तचित्र क्रेडिट हस्तान्तरण | USAHello | USAHello
विदेशी प्रतिहरू – अर्को देशबाट वृत्तचित्र क्रेडिट हस्तान्तरण
प्रत्येक देश फरक स्कूल सिस्टम छ. तपाईं कसरी विदेशी प्रतिहरू संयुक्त राज्य अमेरिका मा अघिल्लो शिक्षण प्रयोग गर्न सक्षम हुन मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ सिक्न.
तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका मा अध्ययन सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो देशमा पायो शिक्षा देखाउन आवश्यक. तपाईं पनि आफ्नो शिक्षा काम मालिकहरूको लागि अनुरोध गर्न सक्छ. तपाईं विदेशी रेकर्ड मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक हुनेछ. तर तपाईंले आफ्नो देशमा प्रमाणपत्र वा डिग्री पनि भने, तपाईं पुरानो काम मा काम गर्न थप कक्षाहरू वा परीक्षण लिन आवश्यक पर्दछ.
तपाईं शब्द थाहा
कागज उच्च विद्यालय वा कलेज मा प्राप्त पंक्ति सूची. अधिकांश मानिसहरू स्नातक पछि तिनीहरूलाई प्राप्त. तपाईं सामान्यतया स्कूल बढी विदेशी पदहरू लागि अनुरोध गर्न सक्छ.
शैक्षिक मूल्यांकन आफ्नो पाठ अनुवाद कम्पनीहरु द्वारा आयोजित गर्दै छन् र तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ. तपाईं आफ्नो देशमा पायो शिक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका मा नै वा यस्तै छ कि छैन भनेर निर्णय.
विद्यालय अमेरिकी प्रणाली र विश्वविद्यालयहरु Aatmadia प्रयोग (क्रेडिट). यो प्रत्येक वर्ग वा तालिम तोकिएको एक संख्या जम्मा. सामान्यतया, यो ग्रेड 2-3 क्रेडिट. तपाईं स्नातक अघि, तपाईं एक निश्चित कुल क्रेडिट प्राप्त गर्न.
वैज्ञानिक डिग्री विश्वविद्यालय वा कलेजमा एक उपाधि छ.
कहिले र कसरी विदेशी रेकर्ड मूल्यांकन को प्रतिहरू प्राप्त गर्न
तपाईं कौशल बिना काम खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो शिक्षा प्रमाणित गर्न आवश्यक छैन सक्छ. तिनीहरूले विदेशी प्रतिलिपि तपाईं सोधेर छौं कि केही जब र खुट्टा थाहा. साथै, तपाईँले एक उच्च विद्यालय उपाधि वा कलेज डिग्री छ भने केही जब थप भुक्तानी. तपाईं विदेशी रेकर्ड आकलन गर्न आवश्यक थियो भने, तपाईं मूल्यांकन शुल्क को राशि प्रदान गर्न सक्छन्.
तपाईं एक काम वा एक पेशेवर स्थिति प्रस्ताव भने, तपाईं निश्चित आफ्नो डिग्री को एक मूल्यांकन प्राप्त गर्नुपर्छ. किनभने यो लामो समय लाग्न सक्छ तुरुन्तै लागि जब खोजी सुरु.
पहिलो, आफ्नो स्कूल को एक नक्कली प्राप्त. र तिनीहरूलाई कम्पनी प्रतिहरू मूल्याङ्कन गर्न, त्यसपछि पेस. सामान्यतया, आकलन दुई प्रकार छन्:
अलग वा चक्र चक्र को जुदाई मूल्यांकन: पाठ निवासी सबै पङ्क्तिहरू एक द्वारा एक लिएको हेर्न विदेशी प्रतिहरू देखिन्छ. तिनीहरूले तपाईंलाई संयुक्त राज्य अमेरिका मा आवश्यक ती समान गरेका छन् कि कक्षा यदि हेर्न चाहनुहुन्छ. तपाईं कलेज गर्न परिचय चाहनुहुन्छ जब यो गरेको छ. सामान्यतया बीच खर्च 150 र 200 डलर.
कुल दर्जा: पाठ निवासी जो म मूल आफ्नो देशबाट पायो गर्न डिग्री संयुक्त राज्य अमेरिका मा नै डिग्री प्रमाणपत्र छ कि छैन भनेर हेर्न विदेशी प्रतिहरू देखिन्छ. यो सामान्यतया काम गर्दा प्रगति गरेको छ. बारेमा लागत 400 डलर.
कहिलेकाहीं, यो स्कूल गइसकेको बन्द हुन सक्छ. यो पनि एउटा असुरक्षित क्षेत्रमा हुन सक्छ. दुवै अवस्थामा, तपाईंले आफ्नो स्कूल को प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सक्षम नहुन सक्छ. तपाईं काम को प्रतिलिपि प्राप्त गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि मानव संसाधन कम्पनी विभाग यसलाई व्याख्या. कि स्कूल समर्पित थियो भने, तपाईंको समस्याको बारेमा स्कूल प्रवेश विभाग सम्पर्क.
तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका मा आफ्नो अध्ययन पूरा गर्न थप पाठ आवश्यक बताए हुन सक्छ. यो भावना धेरै निराशा हुन सक्छ. यस को लागि एक कारण छ कि सम्झना. उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्य अमेरिका मा इराक मा एक architect र architect नै काम गर्न सक्ने. तर सिक्ने लागि विभिन्न प्रणाली छन्.
तपाईं एक काम छ भने म तिनीहरूलाई भर्न आफ्नो देशमा शिक्षा को एक महान सम्झौता गर्यो, तपाईं नयाँ प्रमाणपत्र प्राप्त वा थप पाठ प्राप्त गर्न काम गर्न आवश्यक पर्दछ. डाक्टर, वकिल र शिक्षकहरू यो सबै गर्न आवश्यक. लागि जब प्रमाणपत्रहरू आवश्यक छैन, तपाईं एक नयाँ प्रमाणपत्र आवश्यक छैन सक्छ. तपाईंलाई काम गर्न सक्छन् आफ्नो कौशल देखाउन पर्याप्त हुनेछ.
तपाईं मूल्यांकन को परिणाम बारे भ्रमित छन् र तपाईं थप मद्दत प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं मूल्यांकन सञ्चालन गर्ने कम्पनी सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं पनि स्कूल सल्लाहकार साक्षात्कार गर्न सक्नुहुन्छ. यो तपाईं आफ्नो मूल्यांकन पढ्न र तिमीहरूलाई भन्नेछु तपाईं लिएको कक्षाहरू गर्न आवश्यक मदत गर्नेछ.
विदेशी प्रतिहरू मूल्यांकन कम्पनीहरु
विश्व शिक्षा सेवा
शैक्षिक आकलन सेवा
बासिन्दा शिक्षकहरूले Alaatmadion
संसारको धन कम्पनी वसोवास
अन्य उपयोगी लिङ्कहरू
गर्न सक्छन् विश्व Upwardly तपाईं आफ्नो कौशल र संयुक्त राज्य अमेरिका सेना आफ्नो शिक्षा र क्यारियर मार्ग पूर्व काम अनुकूल सहायता र कर्मचारीलाई अनुभव को मूल्य देखाउन.
इन्टरनेट मा शरणार्थी केन्द्र देखि संसाधन
लागि जब खोज
म कलेज लागि कसरी लागू हुन्छन्?